Hypnotherapy စိုးရိမ်စိတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား? | Santotoro
Posted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2019 by admin
ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်တက်ရောက်နေသောကျွန်ုပ်၏ hypnotherapy ချိန်းဆိုချက်ကိုသွားစဉ်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းစိတ်ပူပန်နေကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသည်မြန်ဆန်စွာချွေးများထွက်လာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါကငါ့အတွက်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာသာမန်အဖြစ်အပျက်တွေကိုတောင်မှ Apocalyptic အချိုးအစားပြintoနာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့စိတ်သဘောထားရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အဖြစ်သို့ရောက်သွားတဲ့ ‘what ifs’ ရဲ့ cacophony ။
ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာ Harley Street မှာရှိနေတာပဲ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်အားစိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးစေပြီးလက်ရှိတွင်ရှိနေစေကာကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းမှအလွန်အမင်းစိုးရိမ်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ကာလက်တွေ့ hypnotherapist ဆရာဝန် Fiona Lamb ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဘာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းမသိပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်မကဆုမတောင်းဘဲညည်းနေလိမ့်မည်ထင်သည်။
ငါအမှတ်အသားတော်တော်ဝေး။ သိုးသငယ်ကကျွန်မကိုနွေးထွေးမှု၊ စာနာမှုနှင့်ကြီးမားသောအပြုံးဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်။ သူမ၏ရုံးခန်းသည်သေးငယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအိတ်ဆောင်နာရီကိုသူမဆွဲထုတ်နိုင်ပါ။ သူမသည်သော်လည်းငါ့ကြိုတင်နားလည်မှုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
“ လူတွေဟာ hypnosis ကိုတီဗွီမှာပြတဲ့စင်မြင့်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့မှော်၊ လှည့်မကြည့်နိုင်တဲ့နာရီ၊ ကြက်သားဆူညံသံမရှိပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရရှိနိူင်တဲ့သဘာဝအခြေအနေ၊ တွေးတောဆင်ခြင်မှုနှင့်အလွန်ဆင်တူပါသည်။
ငါယူဆချက်တွေအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်သိုးသငယ်ကဂရုမစိုက်ဘူး။ သူကချက်ချင်းပဲကျွန်မကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စွာ ထား၍ ဘာကြောင့်ငါလာခဲ့ရကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အောင်မြင်လိုချင်တာကိုရှင်းပြဖို့ပြောတယ်။ သူမလည်းသူမသည်ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အိပ်မပျော်မှုကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ သိမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး (CBT) မှဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးနောက်သူမသည် hypnotherapy ကိုနောက်ဆုံးတွင်သူ့အတွက်အသုံးချခဲ့သည်။
Hypnotherapy သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပြwithနာများကိုအမှန်တကယ်ကူညီခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးမှလုပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ရသည်ကိုလေ့လာလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူမကရှင်းပြသည်။
ငါတို့ရွေး hypnotherapy စိုးရိမ်စိတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား? အားလုံးကိုကြည့်ရန်
ဒီတော့ hypnosis ကယ့်ကိုပါဝငျသနညျး အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ပြLambနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖို့ကြိုးစားခြင်းလို့ Lamb ကဆိုပါတယ်။
“ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုပါ။ ဘာကြောင့်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါတယ်။ အရင်းခံအကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ဒါဟာယုံကြည်ချက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အမြဲတမ်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သိုးသငယ်ကထိုင်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ သူမသည်စတီရီယိုတွင်စိတ်အေးအေးထားသည့်တေးဂီတကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုပိတ်ရန်ပြောသည်။ ဖြည်းဖြည်း၊ ညင်ညင်သာသာပြောပြီးနောက်ပြန်ရေတွက်လျှင်သူမသည်တရားထိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရပေမယ့်လုံးဝတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါနေဆဲနိုးနှင့်ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားပါ။ ငါလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါ hypnosis ကိုအချိန်မရွေးရပ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ဒီအခြေအနေမှာ Lamb ကကျွန်တော့်ဘဝမှာကြောက်စိတ်တွေခံစားနေရတဲ့အချိန်ကိုပြန်သွားဖို့ပြောတယ်။ ငါချက်ချင်းချွတ်ပယ်ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
ကျွန်တော့်တစ်ချို့ကဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုခုခံတွန်းလှန်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကလေးဘဝကတည်းကမေ့ပျောက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောပြခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့အားသင့်မိတယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းအရေးမကြီးအဖြစ်ပယ်ရှားပေမယ့်ပုံနေဆဲငါ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၌နေဆဲဖြစ်ရပ်များ။ “ မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်ကလာတာလဲ” ငါထင်တယ်။
အချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီမှကျွန်ုပ်၏ယခင်အတိတ်ဗားရှင်းကိုစိတ်ကူး။ သူမ၏စကားများကိုအသံကျယ်ကျယ်ပြောရန်ပြောရန်သိုးမွှေးကပြောခဲ့သည်။ ဒါကနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူး၊ ရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းငါလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေမယ်ဆိုရင်နာရီဝက်လောက်မိုက်မဲတာကိုခံစားရတာကျိုးနပ်ပါတယ်။ “ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မင်းလုံခြုံနေပြီ” လို့ကျွန်မရဲ့အတွင်းစိတ်ကလေးကိုမပြောချင်တော့ဘူး။
သိုးသငယ်ကကျွန်ုပ်ကိုအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတဲ့အခါသူပြီးသွားပြီ၊ ငါ session ထဲမှာငါမှတ်မိသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ် freaked ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာရီအတူတူသော်လည်းပျံသန်းခဲ့သည်။ သိုးသငယ်ရဲ့ရုံးခန်းကနေကျွန်တော်ထွက်ခွာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာအသက်အရွယ်တွေထက်ပေါ့ပါးပြီးပိုသာယာတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါ့ချိန်းချက်မှုကငါ့ကိုတကယ်ပဲအကူအညီဖြစ်စေမလားအချိန်ကောင်းပဲပြောလိမ့်မယ်။ သို့သော် Anxiety UK မှ Dave Smithson ၏အဆိုအရလက်တွေ့ hypnotherapy သည်ပျော့ပျောင်းခြင်းမှအသင့်အတင့်စိုးရိမ်ခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါကအလုံအလောက်လုပ်ပေးပေမယ့်လူတိုင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်ဘူး။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအကဲဖြတ်တာကဒီအချက်ကသက်သေပြနေတာကတော့သုံးစွဲသူ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ မှာကုသမှုပြီးဆုံးတဲ့အခါပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀ င်ရောက်သူတွေရဲ့ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာကုသမှုကိုခံယူနေကြတယ်” ဟုသူကသတိပေးသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကုသရာတွင် hypnotherapy ၏အောင်မြင်မှုအတွက်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အထောက်အထားမရှိသေးပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ” စိုးရိမ်စိတ် ” ရှိသူများကိုကူညီရန် (သင်၏စရိုက်လက္ခဏာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလိုလိုလားလားရှိခြင်း) ကိုထိရောက်စွာအထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကလေ့လာမှုများပိုမိုပြုလုပ်ရန်တသမတ်တည်းအကြံပြုသည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်သက်သေပြရန်လုံလောက်သောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, က IBS ကုသအတွက်ဂတိတော်ကိုပြသကြောင်းအကြံပြုပိုပြီးလေ့လာမှုများရှိပါတယ်။
သို့သော်ယခုအချိန်တွင် NHS တွင်ကုသမှုမရနိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုကြိုးစားလိုသူများသည်သီးသန့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ တစ်နာရီလျှင်ပေါင် ၅၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ ငါနှစ် ဦး ကို complimentary အစည်းအဝေးများရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်မှုထဲကစျေးနှုန်းခဲ့ကြပေသည်။
စိတ်ရောဂါ (သို့) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမကျန်းမမာသူတစ် ဦး ဦး အားအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သောကြောင့် hypnotherapy လုံးဝအကြံမပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြသင့်သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် hypnotherapy ကိုမထုတ်ခင်သင့်တော်တဲ့ဆေးကိုညွှန်းပေးနိုင်တဲ့သင့်မိသားစုဆရာဝန်နဲ့အရင်ပြောသင့်တယ်။ သင်၏နယ်မြေအတွင်းရှိ NHS ကိုယ်တိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။ သင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်မလိုဘဲစိတ်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူ (ဥပမာ CBT၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကုသမှုအတွက်ရွှေစံနှုန်း) နှင့်စကားပြောသောကုထုံးများကိုသင်ရနိုင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ သင်၏အစားအစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သတိရှိခြင်း၊ ဆေးညွန်းခြင်းနှင့်အခြားအထောက်အပံ့များသုံးခြင်းတို့ဖြင့်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်နှင့်စကားပြောခြင်းအပါအ ၀ င်သင်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြေရှင်းရန်အခြားမည်သည့်ကုထုံးကိုမဆိုလေ့လာခြင်းသည်အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထောက်ပံ့မှုများကိုရယူရန် Headspace အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် Anxiety UK ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သောကိရိယာများ “ စမစ်ဆင်ကပြောကြားသည်။
“ ဒီရောဂါဟာကုသမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲကုသမှုတစ်ခုအပါအ ၀ င်အပြောင်းအလဲတွေပေါင်းစပ်ပြီးမကြာခဏတွေ့ရှိရတယ်။ “
ငါပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝ hypnotherapy မှအရှုံးမပေးဘူး Lamb သည်မိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်မှုပေးသော hypnosis အစည်းအဝေးများအတွက်အသံဖိုင်အချို့ကိုပို့ပေးသည်။ ယခုငါကြိုးစားကြည့်မည်ဟုကတိပေးသည်မှာ ‘ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုကြည့်ရှုခြင်း’ နှင့်သားရေအိပ်ရာများထက်ကုသမှုပိုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။